जापानमा नेपाली अनुभवः रुखमा पैसा फल्दैन - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
जापानमा नेपाली अनुभवः रुखमा पैसा फल्दैन
अन्जना पौडेल काठमाडौं पुस २६
जापानको टोकियो शहर
ट्राभल, फुड एण्ड लाइफ ब्लग
जापान नेपाली विधार्थीहरुको मुख्य अध्ययनको गन्तव्य हो। पछिल्लो समय जापानले नेपालसहित विभिन्न देशबाट कानूनी रूपमा नै कामदारहरू लैजाने भएपछि नेपाली श्रम बजारमा जापानको चर्चा चुलिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनाबीच बिहीबार भएको भेटघाटका क्रममा समेत जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयले प्रवेश पाएको थियो।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार अर्कोसाता नेपाली कामदार जापान लैजाने विषयमा छलफल गर्न जापानी एक टोली नेपाल आउने भएको छ।
जापानमा रहेका नेपालीहरु
सो टोलीले नेपाली पक्षसँग वार्ता गरेपछि मार्च(फागुन–चैत्र)सम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर अप्रिल(बैशाख)सम्म नेपाली कामजार जापान जाने बाटो खुल्ने उनले जानकारी दिए।
हालसम्म जापानमा विधार्थी भिषामा मात्रै नेपालीहरुलाई जाने गर्छन्। जापान कस्तो वैदेशिक गन्तव्य हो त? त्यहाँ अवस्थित नेपाली विधार्थीहरुसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी:
कविता श्रेष्ठ (२३), ललितपुर, हाल टोकियो जापान
म जापान आएको आउँदो अप्रिलमा ४ वर्ष पूरा हुन्छ। म अहिले साथीसँग कोठा सेयर गरेर बसेकी छु। यता आएपछि दुईवर्ष भाषा र दुई वर्ष कलेज९नेपालको प्लस टु जस्तो पढाइ० पूरा भएपछि हामीले कामको लागि कम्पनी खोजेर अप्लाई गर्न सकिन्छ।
यताको विद्यार्थी जीवन निकै गाह्रो छ। हप्ताको २८ घण्टा मात्र काम गर्न पाइन्छ। त्यसवापत महिनामा लगभग १ लाख ५० हजार जति कमाइ हुन्छ। त्यति पैसा त घर भाडा, पानी, गाडी भाडा, विद्यालय शुल्क र यताउतामै खर्च गर्न ठिक्क हुन्छ। एउटा पनि बचत हुँदैन।
विद्यालय छुट्टी भएको बेलामा भने हप्ताको ४० घण्टासम्म काम गर्न पाइन्छ। मेरो चाहिँ ‘वर्किङ’को लागि भिसा आवेदन गर्ने बेला भएकोले हाल नियम अनुसार हप्ताको २८ घण्टा मात्र एउटा पिज्जा रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेकी छु। पहिला भने गैरकानूनी रुपमा बढी समयपनि काम गरियो।
यता आएपछि धेरै समस्याहरू पनि पर्न सक्छन्। ती समस्या सुल्झाउन आफू पढिरहेको विद्यालयले मद्दत गर्छ र हामी कम्पनीमा काम गर्न थालेपछि भने विद्यालयले हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीलाई नै सुम्पन्छ। साथै ‘नेपाली इन जापान’ फेसबुक पेज मार्फत पनि समस्या राखेमा, जापानमा नै बसिरहनु भएका दाई दिदीहरूले समस्या समाधान गर्न सहयोग त गर्नु हुन्छ। सल्लाह सुझाव पनि दिनु हुन्छ। यता आउन चाहने नेपालीहरुलाई राम्रोसगँ भाषा सिकेर र जापानको भौगोलिक बनावटको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र यता आउनुहोला भन्न चाहन्छु।
वैकुण्ठ चौलागाई (२९) भक्तपुर, हाल फुकुसिमा जापान
जापानको बसाई, सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन् तर त्यस्तो असजिलो, नराम्रो पनि हैन। अलिकति बुझेर र तयारी गरेर आउने हो भने त राम्रो छ । करिब ५ वर्षअघि, म आफ्नो भविष्य उज्वल बनाउने, धेरै पैसा कमाउने र परिवारलाई खुसी पार्ने सपना बोकेर जापान आएँ। कम तयारी र जापानको बारेमा थोरै जानकारी लिएर आएकोले होला, मैले जे सोचेर आएको थिएँ, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो।
जापानमा सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मेरो सोच तब पानी पानी भयो जब एक महिनाको कमाई त मेरै खर्चमा मात्र ठिक्क भयो। मैले निकै नै दुःख गर्नु प¥यो र अहिले पनि गरिरहेको छु।
जापानको संस्कृति एकदम फरक छ। सुरुसुरुमा भाषा र संस्कृतिले मलाई निकै असहज बनायो। मैले ४ वर्षको पढाइ सक्काएपछि ‘वर्किङ भिसा’को लागि आवेदन गरेँ। तर म छनौटमा परिन।
यसै नेपाल फर्किनु भन्दा बरु फेरि पढ्छु भनेर मैले युनिभर्सिटी लेभलको पढाइको लागि भर्ना भएँ। अहिले म फेसन डिजाइन पढ्दैछु र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा काम पनि गरिरहेको छु। फेरि ‘वर्किङ भिसा’को लागि आवेदन दिने सोचमा छु।
यो पटक मिल्यो भने काम गर्छु नभए नेपाल नै फर्कन्छु। यहाँ गरेको जति दुःख नेपालमा गर्ने हो भने धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ र परिवारसँगै बस्न सकिन्छ। यता काम गर्ने क्रममा हामीले समयमै पुगेर इमान्दार भएर काम ग¥यौँ भने जापानिजहरुले पनि सक्दो सहयोग गर्छन र राम्रो व्यवहार देखाउँछन्।
समयमा काममा नजाने, अल्छी गर्ने र धेरै छुट्टी लिने गरियो भने चाहिँ उनीहरुले राम्रा मान्दैनन् र खासै सहयोग पनि गर्दैनन्। यता आउनको लागि भाषा, सस्कृति, भौगोलिक बनावट र यताको रहनसहनबारे राम्ररी जानकारी लिएर आउनुहोला। जापान बस्ने साथी, छिमेकी र नातेदारसँग पनि केही कुरा सोधेर र बुझेर आउन सकिने छ भने, राम्रोसँग सिक्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र आउनुहोस् ।
शुन्यता थापा (२३), सूर्यविनायक भक्तपुर, हाल टोकियो जापान
नेपाल होस् या जापान, काम गर्न सबैतिर गाहै्र हुन्छ। निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यहाँ पैसा रुखबाट टिप्ने होइन। दुःख र सङ्घर्ष नगरी कतै पैसा कमाउन सकिदैन।
साथीहरु जापानमा छँदैछन् नी भनेर साथीहरुको भरमा जापान आउने काम कहिल्यै नगर्नुस्। जापान जाने साथीहरू त मस्तीमा छन्, क्या खतरा फोटोहरु हालिरहन्छन फेसबुकमा! यस्तो सोचाइ राखेर यहाँको जीवनबारे धारणा बनाउनु एकदम गलत हो।
पूर्ण तरिकाले दुःख गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने मात्र यता आउनुहोला। पढ्ने भन्दा पनि पैसा कमाउने सोच बढि लिएर नेपालीहरू यता आउने गर्छन्। जापान गइन्छ अनि महिनैपिच्छे धमाधम घरमा पैसा पठाइन्छ भन्ने सोच लिएर आउने धेरै छन्।
तर वास्तविकतामा त्यस्तो हुँदैन। विद्यार्थी भिसामा आउनेले हप्ताको जम्मा २८ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँछन्। त्यसबाट आएको तलब घर पठाउन त के आफ्नै लागि समेत खर्च गर्न पुग्दैन। त्यसैले धेरै विद्यार्थी पढ्न कम जाने र पैसा कमाउनको लागि २-३ ठाउँमा खटेर गैरकानुनी रुपमा काम गर्ने गर्छन्।
पढाइ सकाएर ‘वर्किङ भिसा’को लागि आवेदन गर्दा विद्यालयको उपस्थिति पनि हेर्ने गर्छ। धेरै जसो विद्यार्थी अनियमित हुने र विद्यालय गएपनि कक्षामा नै सुतिदिने हुनाले ‘वर्किङ भिसा’को लागि समस्या हुन्छ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्कनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले जापान जाने बित्तिकै पैसा कमाउँछु भन्ने सोचले नआउनुस्। राम्रोसँग भाषा सिकेर, पढाइ सक्काएर अनि बल्ल पैसा कमाउने तर्फ लाग्ने सोच बनाएर आउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। तर सोचलाई वास्तविकतामा बदल्न सक्नुपर्छ।
‘नेपाली विद्यार्थी जापान आउँछन् तर पढ्नका लागि होइन’
प्रकाशित २६ पुस २०७५, बिहिबार | 2019-01-10 13:00:06